Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): တပ်မတော် စစ်ကြောင်း တစ်ခုနှင့် ကေအိုင်အေ အဖွဲ့တို့ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်
တပ်မတော် စစ်ကြောင်း တစ်ခုနှင့် ကေအိုင်အေ အဖွဲ့တို့ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်
at 2/13/2013 11:02:00 AM
နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂
ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး အမြန် ရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရုံး၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက် နေ့နှင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့၏ သတင်း ထုတ်ပြန် ကြေငြာချက် (၃/၂၀၁၃)ပါ အတိုင်း မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ခြင်းမှ အပ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှု မပြုခြင်းအား အလေးထား လိုက်နာလျက် ရှိပါသည်။ဖားကန့် မြို့နယ် အတွင်း နယ်မြေ စိုးမိုးရေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော တပ်မတော် စစ်ကြောင်း ၁ ခုသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့ ၁၂၃၀ နာရီတွင် ဝှေလုံ/ဝှေခါ အရှေ့ဘက် ဂျာရားယန် ကျေးရွာ အနီး ရောက်ရှိခဲ့စဉ် ကျေးရွာ ဥက္ကဌ မှ ရွာဝန်းကျင် ၌ ကေအိုင်အေ ၃၀ ခန့် ရှိနေကြောင်း လာရောက် သတင်း ပို့ခဲ့သည်။ထိုအချိန်တွင် ရွာအတွင်းမှ ကေအိုင်အေ ၁၀ ဥင်္ီးခန့်သည် လက်နက်မပါ အရပ်ဝတ်ဖြင့် တပ်မတော် စစ်ကြောင်း ရှိရာသို့ လာရောက် ခဲ့ပါသည်။ထိုအချိန်တွင် တပ်မတော် စစ်ကြောင်း အနေဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်း မပြုလုပ်ဘဲ တပ်အသင့် နေရာယူ၍ စောင့်ဆိုင်း ခဲ့ပါသည်။ ၄-၂-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ရွှေလီ တွေ့ဆုံမှု၏ ရလဒ်ဖြစ်သော ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေ့ရှု့၍ ဆောင်ရွက် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ထိုသို့ လာရောက် ရာတွင် ကေအိုင်အေ ရင်း(၆)မှ ဗိုလ်ကြီး လဒွဲ ဆိုသူမှ ဦးဆောင် လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တပ်မတော် အနေနှင့်လည်း ခင်မင် ရင်းနှီးစွာ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ပြီး ဂျရားယန် ရွာကိုဖြတ် ကျော်၍ ရည်မှန်းချက်ကို ဆက်လက် ထွက်ခွာ သွားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinna Ginwang Dap Ba (2) n pu, Hpakant Ginra Dap Dung (6) n pu na, kung (6) hte (9) Dujum Ju La Doi woi awn ai Lai Nawng Hku, Ja Ra Yang shara de myen hpyen niakajawng shang wa ai lam shiga na chye lu ai. Mabyin gaw lai wa sai Februay (11) ya shani hkying (1:00PM) ten ram hta myen hpyen dap Dujum Yan Naing hte Dujum Hkyin Maung Htwe woi awn ai masat (102) hpyen dap ni KIA myu tsaw share ninghkring ni nga ai Ja Ra Yang deakajawng sha du shang wa ai re lam, n dai zawn n myit mada ai sha KIA myu tsaw share ninghkring ni hte myen hpyen hpung ni hkrum zup ai hta myen hpyen ni kawn shanhte hpe n gap na matu marawn jahtau tsun shana wa ai lam na chye lu ai. N dai zawn myen hpyen hpung ni kawnangwiapyaw hte hpyi nem tsun wa ai majaw KIA myu tsaw share ninghkring ni kawn mung myen hpyen hpung ni hpe hkap gap gasat ai lam n nga ai shaatsawm sha hkap tau la nna shada hkrum zup shaga lai wa sai lam, KIA myu tsaw share ninghkring ni hte myen hpyen hpung ni shada hku hku hkau hkau shakram jahta hkat,ahpum hkat rai myen hpyen hpung ni mungapyaw sha bai htingnut mat wa sai lam hpe na chye lu ai.
N dai zawn hkrum zup ai hta KIA myu tsaw share ninghkring ni maga na n gun (100) ram rai nna, myen hpyen maga na gaw n gun (80) daram re lam hpe mung matut na chye lu ai.